DTG yekuwedzeredza mucherechedzo kubva pachidimbu chimwe - P&M KOMPUTER EMBROIDERY → Chipfeko chekusimudzira.
DTG kudhinda - mukana wekudhinda kubva pachidimbu chimwe
DTG kudhinda ndiyo imwe yetsva nzira dzekumaka mbatya nezvimwe zvekushandisa. Iyo DTG hunyanzvi inokutendera kuti ushandise chero grafiki pane machira ekotoni kana donje ine musanganiswa weelastane / viscose. Graphics zvinogadzirwa uchishandisa yakakosha purinda. Iyo midziyo yatinayo ndiyo yazvino purinda modhi Hama GTXpro Bulkiyo, nekuda kwemisoro yemabhizimusi, inokurumidza kudhinda yakananga pane izvo zvinhu. Kudhinda kweDTG kunogonesa rakakwana ruvara kubereka nekushanduka kwemavara. Kudhinda kunogoneka pasina chikonzero chekugadzirira chirongwa kubva pachidimbu chimwe chete.
Yakaburitswa masiki ekotoni, evakadzi uye evanhurume vane mukana wekudhinda kana kambani logo
Kudhinda pamask uye zvishongedzo uchishandisa iyo DTG nzira nechero logo yevashandi
Kugara kweDTG kudhinda kunoenderana nezvinhu zvinoverengeka. Chekutanga pane zvese, iyo modhi uye ma parameter - chitsva chishandiso, zvakanyanya mhando iri nani uye negoho. Zvimwe zvinhu zvinokanganisa kugadzikana mhando dzependi dzinoshandiswa, jira rinogadzirwa iro uye hunyanzvi hwemushandi.
Yedu Hama GTXpro Bulk printa inoita kuti zvikwanisike pirinda nehukuru hwakawanda hwe40,6 cm x 53,3 cm. Kutenda nekudzikiswa kwemitengo uye nguva yekuchengetedza, zvinokwanisika kugadzirira muchina wekudhinda nekukurumidza uye nekudzora huwandu hwekukanganiswa pabasa. Iyo yakakwana musoro kukwirira haingomise chete iyo yekudhinda kana iyo feeder iri nengozi padyo nemusoro, asi zvakare inotarisisa kurefu kure kure pakati pemusoro neanodyisa, iyo inogara ichivimbisa yakakwira kudhinda mhando. Iyo nyowani, yakavandudzwa chena inki musoro ine yakawedzera nhamba yemabhomba inopa 10% nekukurumidza kudhinda modhi. Izvi, zvakare, zvinoshandura kuita zvipfupi kurongedza nguva dzemutengi.
DTG inodhinda yakanakira yekuyera-kuyera mamaki uye mashoma editions
Iyo nyowani DTXpro Bulk purinda iri inochinjika uye yakanyanyisa kuita mhando. Iyo inopa mashoma ekugadzira kugona, ichichiita chakanakira kuzere-kuraira kuzadzikiswa.
ZVIToro NEMAHARA: GTXpro mhinduro yakanaka yekugadzirira musanganiswa muzvitoro, masangano ekushambadzira, masangano, makirabhu nenzvimbo dzebasa. DTG tekinoroji inochinja uye compact. Kutenda kwazviri, iwe unogona kuwedzera imba yako yekuchengetera nezvakagadzirwa zvigadzirwa senge T-shitsi kune wese munhu ane zita rake, zita rebasa, kushambadzira mabhegiuye kunyange shangu nemifananidzo yako. Munhu inofarira kuzivikanwa kwemushandisi nechiratidzo, icho chinokanganisa icho mufananidzo wakanaka uye kuvimba kunowedzera.
Kudhinda paT-shirts uchishandisa iyo DTG nzira inowanikwa kubva pachidimbu chimwe
Pfungwa dzeGroup neZVIPO ZVIMWE ZVIMWE: Kisimusi, Isita, majubheri, kubudirira kwehunyanzvi, Zuva raAmai kana Zuva reVana ingori nguva dzakakurumbira kugadzirira zvipo zveapo neapo. Iyo yakanyanya kusarudzika, yakasarudzika nguva nenguva - zvirinani pfungwa uye chinzvimbo chakasimba. Zvipo zvekambani zvevashandi kana zvipo zvejubheri se mibairo mumakwikwi mukana wakanaka ku kudziya mufananidzo. Nekudaro, zvipo, kunyanya izvo zvinoshanda, sematauro egore rechi20 rekuvapo kwekambani kana nechiratidzo chemubairo unogamuchirwa kukambani, chichava gadget hombe kune vanobatirana uye vanogona kuve vatengi nokuti simbisa chinzvimbo chekambani kupikisana nemakwikwi.
Nekudaro, mukana wekudhinda kubva pachidimbu chimwe unovhura sarudzo yekugadzirira chipo chepakutanga kune mumwe munhu akakosha pazuva rakakosha. Nhoroondo dzega dzega dzakakudzwa nechipo chakagadzirwa nekutora kweyakagadzirwa wega, uye mhando yepamusoro, zvichasiya ndangariro dzinofadza kwemakore mazhinji. GTXpro inokutendera iwe kuramba wakachinjika mukugadzira, inotipa mukana wekuti tiite nekukurumidza uye nehupfumi kushandurwa mumirairo.
Kudhinda kweDTG hakudi gadziriro yeprojekti, inova imwe yemabhenefiti ayo makuru (sezvazviri nekudhinda kwescreen kana kombasi yemakomputa). Kuitwa kwayo kunokwanisika zvakananga kubva kune iyo mutengi faira, iyo inofanirwa kugadziridzwa zvinoenderana. Izvo zvinokwanisika kupurinda kubva kune chimwe chidimbu, icho chinokutendera iwe kuti uzviite bvunzo kudhinda usati waita huwandu hukuru. Zvakare purinda pikicha zvinogoneka, asi zvakakosha kuti zviri mukugadziriswa kwepamusoro zvinogoneka.
KUGARA: Iyo mukana wakakura yakakwirira mukurumarikana ichigadzirwa pamidziyo yehunyanzvi. Iko kushandiswa kwekuvandudzwa kutsva kweakawanda mashandiro ehupfumi anotendera mutengo wakaderera wekudhinda. Izvo zvinhu zvinofanirwa kunge iri donje kana nemusanganiswa we viscose, kana elastane, asi zvakakosha kuti haina kunyanya kutambanuka.
Kuteedzera kurudziro yemugadziri kunotibvumidza isu kunakidzwa nemhedzisiro yeprojekiti yedu kwenguva yakareba.
Cotton profiles mask ine DTG logo kudhinda
Ona this post
Kudhinda kweDTGkudhinda paT-shirtskudhinda pane zvipfeko zveMasovianRawa Mazowiecka kudhindaanodhinda pane zvipfeko neiyo DTG logoanodhinda pamabhurugwaDTG Polandzvipo zvegachipo t-shatiT-shirts ine Mszczonów logot-shirts ane zvakanyorwat-shirts ane pikichakwechipoDTG yakanyanyisakuwedzeredza DTG Mazowieckiepurinda LodzRawa logo kudhindalogo kudhinda neshoko Lodzchinyorwa pane zvishongedzoDhinda pane sweatshirtspurinda pamakepesikudhinda pane zvipfeko zvevashandikudhinda kubva pachidimbu chimweImprint Warsawchinyorwa Wroclawanodhindira paKatowice T-shirtsmibairo ine marogo emakwikwinaruk pamabhegizvipfeko zvevashandi veStrykówzvipfeko zvine Niepołomice anodhindazvipfeko zvakanyorwa neDTG StrykówNiepołomice yakamisikidzwa zvipfekopfungwachipo chevashandichipo chemunhuzvipo zvine logozvipo nemufananidzombatya dzevashandimbatya dzeimba yekuchengetera dzakadhindwaKumaka DTGkumaka zvipfeko mu Łódź
Computer embroidery - chii icho?